CentOS နှင့်အတူ Oracle ရှုပ်ထွေးမှုများ | Linux မှ
ဒိုင်ယာဇီပန် | | ဖြန့်ဝေ, NOTICIAS
၏နာမတော်ကိုအမှီပြု။ သော်လည်း Oracle က အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့ရန်သူလိုအသံမျိုးရှိတယ်၊ ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာတကယ်ရှိတယ် Oracle က Linux။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပွားဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်သည် Red Hat လုပ်ငန်း Linux သူ့မှာ2kernel ရှိတယ်၊ ၁၀၀% ဟာ Red Hat နဲ့လိုက်ဖက်ပြီး ၁၀၀% ရတယ် "မချိုးဖောက်နိုင်သည့် Enterprise Kernel" ၎င်းသည် Oracle မှစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားပြီး RHEL အသုံးပြုသည့် kernel 2.6.32 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ Oracle Linux သည်အခမဲ့ဖြစ်သည် (download လုပ်ရန်သင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်)၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ယူရို ၄၀၀ ရှိပါကသင်တစ်နှစ်လျှင် Oracle ထံမှနည်းပညာပံ့ပိုးမှုတစ်ခုရနိုင်သည်။
အခုတိုက်ခိုက်မှုဘယ်မှာလဲ။ Oracle ကလုပ်ခဲ့တယ် စာမျက်နှာသေးသေးလေး ဘယ်မှာအသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်စည်းရုံးသည် CentOSaOracle Linux ကိုပြောင်းပါ။ သူတို့ကတကယ်လုပ်ခဲ့တယ် ဇာတ်ညွှန်း အဘယ်အရာကိုပြုလုပ်မွမ်းမံမှုများ Oracle က repositories ကမှလာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သို့သော်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် icing တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ဂရပ်ဖစ် Red Hat ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများကိုဖော်ပြပေးသောစာမျက်နှာပေါ်တွင် အစောပိုင်းက Oracle က Linux ကိုရောက်ရှိ CentOS ထက်။ ၎င်းပြက္ခဒိန်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က CentOS ၏ပြHatနာများကြောင့် Red Hat နှင့်ပြproblemsနာတက်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ Red Hat သည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ထုတ်ဝေပုံကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ clones များပြန်လည်စုစည်းရန်အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့သည် (အထူးသဖြင့် Oracle Linux, CentOS ကိုမလွှဲမရှောင်သာပို့ပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည် Oracle Linux နှင့် Scientific Linux (လူများကိုပြောဆိုရန်စတင်နေသောအခြား RHEL Clone) နှစ်ခုလုံး၏အားသာချက်ကိုယူသောအခါ။ သို့သော်ဂရပ်မပြပါ ၂၀၁၂ တွင်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, နှင့်ကဘလော့ဂ်ဖြစ်ပါတယ် Bashton သူဟာဒီနှစ်အထိဒီပြသမှုအားဖြင့် Oracle ကိုဆန့်ကျင်ရန်ထွက်ကြွလာခြင်း, Red Hat ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ CentOS ကိုအစောပိုင်းရောက် Oracle ထက်။
ဒီတော့ paraphrasing MetalByteOracle the အတွက် ရယ်စရာ သူသည်ဂူဂဲလ်အားအမှုဖွင့ ်၍ တရားသူကြီးကသူ့ပြိုင်ဘက်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည် မိုးသည်းထန်စွာယခုသူတို့သည် CentOS ကိုစတင်တိုက်ခိုက်သည် မကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုလိုသည်မှာကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘဲရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှတိုက်ခိုက်သူဖြစ်သည်။ "
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » CentOS နှင့်အတူ Oracle ရှုပ်ထွေး
Oracle က xD နဲ့ဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး
Oracle ကအသိဥာဏ်ပိုရှိသင့်တယ်၊ သူလုပ်တာကအရှက်ထက်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမုန်းတီးခြင်းဖြစ်တယ်၊ CentOs လိုအခမဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုနဲ့ဆက်သွယ်တာထက် Oracle ကလိုချင်တာကိုရစေတယ်။
Oracle သည်၎င်း၏ Database (လမ်းမကြီးသည်၎င်း၏အထင်ကရထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့်) နှင့်အတူတကွလက်တွဲပြီးအခြားသူများနှင့်မပေါင်းသင်းသင့်ပါ။
တစ်ဖက်တွင် CentOS သည်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြီးခဲ့သည့်နှစ် (အတွင်းပိုင်းပြproblemsနာများ) ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပြီး SysAdmins အမြောက်အများကိုအနိမ့်အမြင့်သို့ရောက်စေသည်။ CentOS) ဟာ patch ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ဖန်ထပ်မံမဖြစ်နိုင်ဟုမည်သူကမျှမအာမခံနိုင်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Oracle သည် OpenSolaris သို့မဟုတ် OpenOffice ကဲ့သို့သောပွင့်လင်းသောစီမံကိန်းများကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ (သူတို့ကအမှန်တကယ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့ကစီမံကိန်းကိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်) ထို့ကြောင့် Oracle Linux ကိုသူတို့ကမ်းလှမ်းပါကမနက်ဖြန်တွင်သူတို့ဗားရှင်းကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှမအာမခံနိုင်ပါ။ "အခမဲ့" နှင့်ငွေပေးချေမှုကိုသာချန်ထားပါ။
သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဟာ CentOS ကိုပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေပြီး RHEL (Red Hat Enterprise Linux) နဲ့တန်းတူပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင် CERN နှင့် Fermilab မှတီထွင်ထားသော SL (Scientific Linux) သည်ကျော်ကြားသော hadron collider အသုံးပြုသော distro ဖြစ်သည်။
CentOS အကျပ်အတည်းကာလ၌ RHEL ပြီးနောက် ၂၄ မှ ၄၈ နာရီအကြာတွင်သူတို့၏ patch မ်ားကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်များစွာသောသူတို့သည် SL သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
- အချို့သော package များကိုပြုပြင်ပြီးသူတို့၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အခြားသူများကိုထည့်သည်။
- သူတို့ကမွမ်းမံမှုများရောထွေး။ ၎င်းတို့သည်လက်ရှိ version 6.2 တွင်ရှိနေသော်လည်း RHEL 6.3 patch များကို၎င်းတို့၏လက်ရှိ version တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သိသာသည်မှာမကောင်းပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် SL ၏ version 6.3 ကိုထုတ်ရန်မလိုပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ "သို့သော်" ရှိ၍ ၎င်းသည် CERN ၏အသုံးပြုသူများကိုသာအာရုံ ထား၍ ၎င်းကိုအတွင်းနှင့်၎င်းကိုမသုံးပါ။ လူများ၏ကျန်။ ဒါပေမယ့်ဒါကမဆိုးပါဘူး၊ ငါ distro ထဲကအနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုရှာနေတာပါ။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် RHEL clone အားလုံး၌“ တစ်ခုခု” ရှိပြီး၎င်းသည်တစ်ခုစီရွေးချယ်သောတစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ, ကုမ္ပဏီများငွေများများများလေ၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးလာလေလေဖြစ်သည်။ ငါသူတို့အချိန်မီဆုံးမခံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရုံ SCO အဖြစ်တက်အဆုံးသတ်ကြဘူး - သူတို့ကကောင်းစွာခံထိုက်ပေလိမ့်မယ်ပေမယ့်။
ငါအလွန် linux ရေးသားခဲ့သည်: Oracle linux?, sacasm အပြင်, Oracle ကဘာလဲ? သူတို့ဟာတကယ့်ပြိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဖြစ်မယ့်လူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဒီမှာပြောသကဲ့သို့သူတို့ကတုတ်ကျနေရင်ငါပြောမလား။ ငါ Oracle admin မှာထင်တယ်၊ ခေါင်းတချို့လှိမ့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ!
"ငါသည် Larry ကိုမုန်းတယ်" နှင့် "ငါ Oracel ကိုမုန်း၏" ခိုင်လုံသောနည်းပညာဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများမဟုတ်ပါ။